नेपाल प्रहरीको टोपीमा भारतको झन्डा ! – Himalaya TV
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:४५ निगमले सही ढंगले काम नगरे मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्छ: मन्त्री अधिकारी
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:३४ संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:२३ अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपालमा ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:१४ संरक्षित वन्यजन्तुको दाह्रासहित पक्राउ
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:१० कफीको नयाँ मूल्य निर्धारण
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:०४ कर दिवसका अवसरमा साताव्यापी कार्यक्रम हुने
Home » समाचार » नेपाल प्रहरीको टोपीमा भारतको झन्डा !
नेपाल प्रहरीको टोपीमा भारतको झन्डा !
२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार ०८:२२
काठमाण्डाै, २७ असाेज । नेपाल प्रहरीले लगाउने पोशाकमा छिमेकी मुलुक भारत झल्काउने संकेत छ भन्दा कतिपयलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।
सुरक्षाकर्मीले लगाएको टोपीमा यस्ता संकेत भेटिएपछि यसलाई पत्याउनै पर्छ । कतिपय प्रहरीले लगाएका टोपीमा भारतको राष्ट्रिय झण्डा (तिरंगा), मेरो भारत महान, सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हामारा’ लेखिएका थुप्रै संकेत छन् । ती संकेत टोपीको भित्रपट्टि राखिएका छन्। अझ कतिपय टोपीमा भेडाको चित्रसमेत उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
आफ्नो स्वाभिमानमाथि नै आँच आउने खालका यस्ता टोपी सुरक्षाकर्मीले वर्षैंदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी नभएर हो वा संगठनकै लापरवाहीले हो सुरक्षाकर्मीको स्वाभिमान गिराउने काम भएको छ । संगठनको तल्लो तहका जवान मात्रै नभई अधिकृतले लगाउने टोपीमा समेत यस्ता चिह्न, नारा भेटिएका छन् ।
एक प्रहरीले लगाएको टोपीमा भारतीय झण्डा र नारा लेखिएका स्टीकर पाइएको छ । पुरानो भएकाले भारतीय झण्डा भने स्पष्ट देखिँदैन। उनले लामो समयदेखि सो टोपी लगाउँदै आएको बताए । केही समयअघि अर्का एक प्रहरी निरीक्षकको टोपीमा समेत यस्तै संकेत भेटिएको थिया। उनको टोपीको एकतार्फ ‘मेरा भारत महान’ लेखएको र अर्कोतर्फ भारतको राष्ट्रिय झण्डा भेटिएको थियो ।
यस्तो स्टिकर भेटिएपछि उनले तत्काल च्याते फालेका थिए । प्रहरी संगठनले मातहतका सुरक्षाकर्मीका लागि टेण्डरमार्फत टोपीलगायत पोशाक खरिद गर्दै आएको छ । प्रहरीको पोशाक भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको मध्येबाट भिनिे गरेको स्रोतले जनाएको छ । भारतीय कम्पनीले जानाजान यस्तो बदमासी गरेको स्रोतको दाबी छ । याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
निगमले सही ढंगले काम नगरे मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्छ: मन्त्री अधिकारी
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:४५
संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:३४
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपालमा ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:२३
संरक्षित वन्यजन्तुको दाह्रासहित पक्राउ
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:१४
३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १८:१०